I-Terasology, umdlalo ophefumlelwe nguMinecraft ofumanekayo Ubuntu | Ubunlog
I-Terasology, umdlalo ophefumlelweyo weMinecraft ofumanekayo kuBuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga ukuba singayifaka njani iTerasology kwi-Ubuntu. Ngaba iFaka ngokulula le clone yasimahla yeMinecraft kwi-Ubuntu 20.04 okanye kwi-18.04 LTS. Ngalo mdlalo siza kufumana umdlalo webhloko njengeMinecraft enemizobo enomtsalane kunye nemidlalo elula.
Njengoko ndicinga ukuba uninzi lwabasebenzisi bayazi, Minecraft Ngumdlalo othandwayo, okwafumaneka kwiinkqubo zeGnu / Linux. I-Terasology iza nemodeli efanayo kodwa ukunika umahluko kumdlalo, Iiteraology eziveliswe lihlabathi zinomtsalane ngakumbi. Akukho mahluko ngokubonakalayo nangona, kodwa ubunzulu bentsimi kunye neebhloko ezibhabhayo zinokuwenza umdlalo uhlale iiyure. Ngokubhekisele kulawulo eTeraslogy, kufuneka kuthiwe azifani nakuMinecraft, nokuba sele uyidlalile le yokugqibela, ayizukuthatha thuba lide ukuba uyiqhele.
I-Terasology yiyo umdlalo ovulekileyo osekelwe kwi I-voxel, ekwabonwa kakhulu. Uzalelwe kwi-demo ye-teknoloji ephefumlelweyo yedemo, ngokuthe ngcembe iya kuba liqonga elizinzileyo kuzo zonke iintlobo zokuseta komdlalo kwihlabathi le-voxel.
Abadali kunye nabagcini balo mdlalo bayindibaniselwano eyahlukeneyo yabaphuhlisi besoftware evulekileyo, abayili, abavavanyi bemidlalo, amagcisa emizobo, iimvumi kunye nabafundi.. Ukusuka kwiwebhusayithi yabo bakhuthaza wonke umntu ukuba anikele, kwaye bazame ukuba shushu kwaye bamkele kangangoko kunokwenzeka kubantu abafikayo.
1 Neemfuno zeeNkqubo
2 Uyifaka njani iTerasology kwi-Ubuntu 20.04 Linux
Intel i3 okanye i-AMD A8-7600 okanye ngcono
Ubuncinci, ubuncinci be-2GB ye-RAM, nangona isincomo yi-4GB ye-RAM.
I-Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R5 okanye kamva. Ukuba usebenzisa i-GPU yangaphandle, ke iNvidia GeForce 400 Series okanye i-AMD Radeon HD 7000 okanye kungcono ibe lukhetho olufanelekileyo lokudlala.
I-1 GB yendawo yasimahla yediski yokufaka umdlalo. Nangona kunjalo, i-4 GB iyacetyiswa.
Uyifaka njani iTerasology kwi-Ubuntu 20.04 Linux
Ukuqala kuya kufuneka sivule isikhangeli sewebhu kwinkqubo yethu yokusebenza. Emva koko siye ku ngqo kwi iphepha lokukhupha womdlalo. Nje ukuba ungene kuyo, kuya kufuneka ucofe kwifayile ehambelana nayo kwaye ukhuphele u-64-bit uguqulelo lweGnu / Linux.
Sinokuvula kwakhona i-terminal (Ctrl + Alt + T) kunye khuphela uguqulelo lwamva nje olupapashwe ukuza kuthi ga namhlanje nge-wget:
Nje ukuba iphakheji ikhutshelwe, kuya kufuneka sifudukele kwifolda apho sinefayile ekhutshelweyo egciniweyo. Xa sifika kuyo, siya kuyenza khipha iphakheji ngalo myalelo ulandelayo:
Xa uziphu, Siza kususa isikhombisi esenzelwe nje ukuba sibe / opt / terasology. Singakwenza oku ngomyalelo:
sudo mv TerasologyLauncher-linux64-4.2.0/ /opt/terasology
Into elandelayo esiza kuyenza yile yiya kwifolda esandula ukwenziwa:
Okwangoku sine sebenzisa isifaki esiya kuyifumana ngaphakathi kwifolda ngomyalelo:
Cwangcisa kuqala Iya kusicela ukuba sikhethe umkhombandlela wedatha womdlalo. Kulo mzekelo, ndiza kukhetha leyo ivula ngokungagqibekanga ngokunqakraza kwi Khetha iqhosha, ebekwe ekunene phezulu.
Ekugqibeleni, kuya kufuneka Cofa kwi icon yokukhuphela ukufumana ezinye iipakethi ukuze ukwazi ukudlala umdlalo weTerasology kwiGnu / Linux. Nje ukuba kwenziwe oku, sinokulinda kuphela kwaye qala umdlalo Ngokucinezela iqhosha elinokubonwa kwisikrini esilandelayo.
Lo mdlalo ngokungagqibekanga awunandlela emfutshane yokuwuqala kwidesktop. Kodwa singayenza ngokulula ngeendlela ezininzi. Phakathi kwabo sinako se benzisa Arronax okanye senze ifayile yedesktop.
Lo mdlalo wakhiwe ukuba ube yimodyuli kwaye simahla. Inika inani elikhulu leemodyuli ezigcinwa ngabantu abanomdla. I-Terasology ngumthombo ovulekileyo ngokupheleleyo kwaye unelayisensi ngu-Apache 2.0 yekhowudi kunye neCC BY 4.0 yemifanekiso.. Ngolwazi oluthe kratya malunga nalo mdlalo, abasebenzisi banokudibana iwebhusayithi yeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » I-Terasology, umdlalo ophefumlelweyo weMinecraft ofumanekayo kuBuntu
I-QuiteRSS, umthombo ovulekileyo wokufunda we-RSS
IFirefox iya kuthatha indawo ye-ESNI nge-ECH kwiFirefox 85